Biraazil - Howling Pixel
Biraazil biyya Ameerikaa Kibbaa keessa jirtu.
Federaalawaa Riippabiliika Biraazil (Oromoo)
Magaalaa guddoo Brasília
Ameerikaa Kaabaan ardii adunya kessatti Hemisphere Kaabaa fi bayyinan immo Hemisphere Dhihaati argamtu dha. Kan dangeffamte immo kaaban Garba Arkitiikiin, bahaan immo Garbi Atilaantiik kaabaan, kibba-bahan Garba Karibiyaanii, kibba fi dhihaan immo Garbi Paasifiikii kaabaan, kibba-bahaan immo Ameerikaa Kibbaa. Ameerikaa Kaabaa fi Kibbaa kutaa lafa ismasii Panaamaa (Isthmus of Panama) jedhamuun walitti qabamu. Ameerikaa Kaabaan ballina lafa hanga 24,490,000 isquweer kiilomeetira (9,450,000 isq mi) yoo qabaatu kuni immo parsentii fuula addunyaa keessaa parsentii 4.8 qabata yookan immo parsentii fuula lafaa (bishaan malee) yoo ilaalan parsentii 16.4% qabata. Akka Onkoloolessa 2006tti ilallametti bayyinni ummatta ardii kanaa tilmaaman 514,600,000 cala. Ballina lafaatin addunyaa keessaa ardii sadaffa irratti argamtu yoo taatu kunis Eshiyaa (tokkoffa) fi Afrikaa (lammaffa)tti aanteti. Bayyina ummataan immo addunyaa keessaa ardii afurrafa irratti argamtu yoo taatu kunis Eshiyaa (tokkoffa), Afrikaa (lammaffa) fi Yuurooppi (sadaffa)tt aanteti. Ameerikaa Kaabaa fi Kibbaa walumma galatti Ameerikaas jedhamani waammamu. Ameerikaan Kaabaa Yunaayitid Isteetis fi Kanaadaa of keessaa qabdi.
Ameerikaan maqaa ardiilee Ameerikaa lamaan Ameerikaa Kaabaa fi Ameerikaa Kibbaa walitti qabatu.
Arjentiinaa biyya Ameerikaa Kibbaa keessa jirtu.
Baarbeedoos biyya odolootaa kan Antiiliis Xiqqicha keessatti argamtu. Biyyi kun dheerinaan 34km (21mi), dalgeen 23km (14mi) yoo taatu ballina 432km ta'u qabdi.
El Salvaadorn biyya Ameerikaa Giddu Galeessaa keessa jirtu.
Fireenchi Giyaanaan biyya Ameerikaa Kibbaa keessa jirtu.
Gu'aatimaalaan biyya Ameerikaa Giddu Galeessaa keessa jirtu.
Honduraas biyya Ameerikaa Giddu Galeessaa keessa jirtu.
Iqqu'aador biyya Ameerikaa Kibbaa keessa jirtu.
Jamaayikaan biyya odolootaarraa uummamte kan Garba Karibiyaanii keessa jirtu.
Kolombiyaa biyya Ameerikaa Kibbaa keessa jirtu.
Kostaa Rikaan biyya Ameerikaa Giddu Galeessaa keessa jirtu.
Kuubaan biyya odolootarraa uummamte kan naannoo Karibiyaan jirtudha. Biyyi Kuubaa odola guddaa tokko, Isla de la Juventud fi odoloota xixiqqaa bayyeerraa uummamte. Magaalaan guddoo Kuubaa Havaanaa dha. Magaalaan guddinaan lammaffaa ammoo Santiago de Cuba ti.
Meeksikoo biyya Ameerikaa Kaabaa keessa jirtu.
Nikaraagu'aan biyya Ameerikaa Giddu Galeessaa keessa jirtu.
Panaamaan biyya Ameerikaa Giddu Galeessaa keessa jirtu.
Paraaguwaay biyya Ameerikaa Kibbaa keessa jirtu.
Peeruu biyya Ameerikaa Kibbaa keessa jirtu.
Venezu’eelaan biyya Ameerikaa Kibbaa keessa jirtu.